Turf toe (ခြေမအဆစ်လွဲခြင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Turf toe (ခြေမအဆစ်လွဲခြင်း)
Turf toe (ခြေမအဆစ်လွဲခြင်း) ကဘာလဲ။
ခြေချောင်းအဆစ်လွဲခြင်းသည် ခြေမရှိ အဆစ်လွဲခြင်းဖြစ်သောအခြေအနေများကိုပေါင်းခေါ်ခြင်းဖြစသည်။ များသောအားဖြင့် ဘောလုံးသမားများတွင်ဖြစ်တတ်သော်လည်း အခြားအားကစားသမား များ( ဆောစာ ဘက်စကတ်ဘော နပမ်းသမား နှင့် အကသမား)များတွင်လည်းဖြစ်တတ်သည်။
ပြေးခြင်းခုန်ခြင်းတွင် ခြေမကိုခဏခဏဖိခြင်း သို့မဟုတ် တွန်းထားခြင်းတို့ကြောင့်ပိုဖြစ်နိုင်သည်။
Turf toe (ခြေမအဆစ်လွဲခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
Turf toe (ခြေမအဆစ်လွဲခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ခြေမအဆစ်လွဲခြင်းရဲ့ အဖြစ်အများဆုံးရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့ နာခြင်း ယောင်ခြင်း နှင့် ခြေမအောက်မှ မလှုပ်ရှားနိုင်ခြင်းတို့ဖြစ်တတ်သည်။မကြာခဏထိခိုက်မိကြောင့်ဖြစ်ပါကထိုလက္ခဏာများသည် ဖြည်းဖြည်းချင်း ပိုဆိုးလာတတ်သည်။ရုတ်ချည်း အင်အားများထိခိုက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါက အနာသည် ၂၄နာရီအတွင်း နာပြီးပိုဆိုးလာတတ်သည်။တခါတရံ
ထိခိုက်မိချိန်တွင် ဖောက်ခနဲမြည်သံကြားရနိုသည်။အဆစ်တစ်ခုလုံးပါတတ်ပြီး ခြေမမလှုပ်နိုင်ပဲဖြစ်တတ်သည်။
Turf toe (ခြေမအဆစ်လွဲခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ခြေမအဆစ်လွဲခြင်းသည် ခြေမနားတွင် တွယ်ထားသောအရွတ်လွဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ခြေမအဆစ်နောက်တွင် သင့်ခြေထောက်အရိုးသည် ပဲစေ့ပုံသဏာန်အရိုးနှစ်ခု အရွတ်ကြားမြှုပ်နေပြီး ဆက်စီမွိုက်ဟုခေါ်ကာခြေခကိုလှုပ်ရှားပေးနိုင်သည်။ထိုအရိုးများသည် အရွတ်အတွက် ပူလီပုံစံလုပ်ပေးပြီး သင်ပြေးခြင်း လမ်းလျောက်ခြင်းကိုလုပ်နိုင်သည်။ခြေထောက်အပေါ်အလေးချိန်ကျမှုကိုလည်း ခြေထောက်ရှိထိုအရိုးများကထိန်းထားပေးသည်။
သင်ပြေးခြင်းသို့မဟုတ် လမ်းလျောက်ပါက ခြေလှမ်းတလှမ်းခြင်းကို ခြေဖနောင့်မပြီး ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကို ခြေထောက်အရှေ့ပိုင်းသို့ကျစေသည်။
ကိုယ်ကိုရှေ့သို့ ရွေ့ဖို့ခြေမနဲ့အားယူလိုက်တဲ့အခါ ကျန်ခြေထောက်ပေါ် ကိုယ်အလေးချိန်လုံးလုံးသက်ရောက်သွားတယ်။ အဲ့လိုခြေမတွန်းအားသုံးတဲ့အခါ ခြေချောင်းလေးတွေသာလိုက်မရွေ့လဲမြေပေါ်မှာ မျက်နှာပြင် အတိုင်းကျန်ခဲ့မယ်ဆိုရင် အရိုးအဆစ်တွေကိုရုတ်တရက်ထိခိုက်မိစေတယ်။အာ့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့လက်နဲ့ခြေချောင်းလေးတွေကို သူ့ခံနိုင်အားထက်ပိုပြီး အပေါ်ကိုလှန်ချိုးနေတာနဲ့တူတယ်။ခြေချောင်းလေးတွေကိုခံနိုင်တာထက်ခဏခဏပိုလှန်ချိုးမိနေတယ် ဒါမှမဟုတ် ရုတ်တရက်အားနဲ့ လှန်ချိုးမိသလိုဖြစ်မယ်ဆိုရင် အရိုးအဆစ်နဲ့ပတ်ပတ်လည် အရွတ်တွေထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်တယ်။
ခြေချောင်းအဆစ်လွဲခြင်းတွင် ထိခိုက်မှုလဲရုတ်တရက်ဖြစ်သည်။ အားကစားသမားများ ကွင်းပြင်အတု မြက်ခင်းထက်မာသောနေရာတွင်ကစားခြင်းတွင်တွေ့တတ်သည်။ မြက်ခင်းပြင် အဓိကအားဖြင့် ဖိနက်ပျက်ပြီး ခြေထောက်အားလုံလောက်စွာမထောက်ပံ့နိုင်ပါကလည်းဖြစ်တတ်သည်။ တခါတရံ ခြေထောက်အားအရမ်းကွေးအရမ်းရှေ့စိုက်စေသောဖိနပ်စီးသော အားကစားသမားများတွင်လည်းဖြစ်တတ်သည်။
Turf toe (ခြေမအဆစ်လွဲခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဆရာဝန်နဲ့တွေ့ချိန်တွင် ဆရာဝန်မှ သင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေ နင့် ခြေထောက်လက္ခဏာများ မည်သို့ထိခိုက်ပုံများကိုမေးလိမ့်မည်။
စမ်းသက်မှုပြုလုပ်ရာတွင် ဖောင်းနေခြင်း အညိုအမဲစွဲခြင်း ခြေမအဆစ် မလှုပ်ရှားနိုင်ခြင်းရှိမရှိကိုစမ်းလိမ့်မည်။ ခေမြကိုကွေးခြင်း အပေါ်အောက်ဘေးတိုက်စမ်းဖြင်းဖြင့် ပလန်တာတွင် ပျက်စီးမှုကိုဖော်ပြသော် အဆစ်မတည်ငြိမ်မှုရှိမရှိကိုဖော်ပြနိုင်သည်။ ကျန်းမာသောခြေမကိုလည်း နှိုင်းယှဉ်သည့်သဘောဖြင့်ထိုစမ်းသက်မှုများလုပ်လိမ့်မည်။
ခြေမကိုလှုပ်ရှားမှုစမ်းသက်ရာတွင်နာနိုင်သည်။ လိုအပ်ပါက ထုံစေသောဆေးကိုသွင်းပြီးမှစမ်းသက်လိမ့်မည်။
ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်း။ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်းသည် သိပ်သည်းဆများသော အဂါင်္ ဥပမာ အရိုးတို့၏တိကျသောပုံကိုဖော်ပေးသည်။ ပလန်တာအစုအဝေးသည် နူးညံ့သောတစ်သျူးဖြင့်လုပ်ထားသော်လည်း အခြားပြသာနာများမဟုတ်သည်ကိုသေချာစေရန်ဓာတ်မှန်ရိုက်ခိုင်းလိမ့်မည်။
ပလန်တာအစုအဝေးတွယ်သောအရိုးသေးများကြိုးခြင်း ဆက်ဆီမွိုက်အရိုး သေးနှစ်ခု ကျိုးခြင်းတို့ပါဝင်နိုင်သည်။
သံလိုက်ပဲ့တင့်အားဖြင့်ပုံရိပ်ဖော်ခြင်း(အန်အာအိုင်) နူးညံတစ်သျူးများကိုကောင်းမွန်စွာပုံရိပ်ဖော်နိုင်ခြင်း နူးညံတစ်သျူးနှင့်အရိုးထိခိုက်မှုကိုပြသနိုင်သည်။ အဆင့် ၂ နှင့် ၃ ထိခိုက်မှုများသို့မဟုတ် ဓာတ်မှန်တွင်မူမမှန်မှုပြထားသော အရာများကိုအသုံးဝင်နိုင်သည်။
Turf toe (ခြေမအဆစ်လွဲခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ခြေမအဆစ်လွဲခြင်းကုသမှုအခြေခံမှာ အနားယူခြင်း ရေခဲကပ်ခြင်း ဖိခြင်း မြှောက်ထားခြင်းတို့ဖြစ်သည်(အတိုကောက် အာအိုင်စီအီး) အခြေခံကုထုံးသည် အနာကျက်ရန်အချိန်ပေသည့်သဘောဖြစ်သည် ဆိုလိုသည်မှာ ခြေထောက်သည်အနားယူရန်လိုပြီး အဆစ်များကို နောက်ထပ်ထိခိုက်မှုမှကာကွယ်ရန်အချိန်လိုသည်။ ဆေးဆိုင်တိုင်းရနိုင်သောဆေးဝါး ဥပမာ အိုင်ဗျူပရိုဖန် သည် နာခြင်းယောင်ခြင်းကိုသက်သာစေသည်။ ခြေချောင်းကို အနားရစေရန် တိပ် သို့မဟုတ် ကြိုးဖြင့်ချည်ထားနိုင်သည်။ အခြားနည်းလမ်းမှာ ခြေထောက်ကို ပတ်တီးစီးထားခြင်းဖြင့်မလှုပ်အောင်လုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် အထူးပြုလုပ်ထားသောခြေအိတ်များစီးခြင်းတို့လုပ်နိုင်သည်။ ထိခိုက်သောအဆစ်ပေါ်သို့ အလေးချိန်မကျရန် ချိုင်းထောက်သုံးဖို့ပြောနိုင်သည်။ ဆိုးသောကိစ္စများတွင် အရိုးခွဲစိတ်ဆရာဝန်မှခွဲရန်အကြံပေးလိမ့်မည်။
အနာသက်သာရန် နှစ်ပါတ်သုံးပါတ်ကြာနိုင်သည်။ မလှုပ်ရှားမှုလုပ်ပြီးက အရိုးအဆစ်ကုထုံးများယူခြင်းလိုအပ်နိုင်သည်။ ထိုကုထုံးက လှုပ်ရှားနိုင်မှုများ သန်မာခြင်း နှင့်ထိခိုက်မိသောခြေချောင်းအခြေအနေကိုပိုကောင်းစေသည်။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများကသင့်အနေဖြင့် ခြေမအဆစ်လွဲခြင်းကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာအကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
ကာကွယ်သောနည်းလမ်းတစ်ခုမှာ ခြေချောင်းအဆစ်များကို အလွန်ကွေးစေခြင်း တွန်းစေခြင်းကိုသက်သာစေသည့်ဖိနပ်များစီးခြင်းဖြစ်သည်။ ဆရာဝန်သို့မဟုတ် အရိုးအဆစ်ပညာရှင်ညွန်ကြားသည့်အထူးပြုလုပ်ထားသည့်ပစ္စည်းများကိုသုံးရန်လိုနိုင်သည်။ အရိုးဆစ်ပညာရှင်သို့မဟုတ် အားကစားနှင့်ပတ်သတ်သောဆေးဝါးပညာရှင် ထိခိုက်မှုဖြစ်စေသော ထိခိုက်မှုအားပြင်ပေးခြင်း ထိခိုက်မှုနည်းသော နည်းလမ်းများဖြင့် သင်ပေးခြင်းတို့လုပ်ပေးလိမ့်မည်။
Turf Toe: Symptoms, Causes, and Treatments.
https://www.webmd.com/fitness-exercise/turf-toe-symptoms-causes-and-treatments#1. Accessed November 1, 2017.
http://orthoinfo.aaos.org/topic.cfm?topic=A00645. Accessed November 1, 2017.